भोलि किनारामा बसेर धुरूधुरू रूँदै धारे हात लाएर नेतालाई सराप्नुभन्दा आजै सचेत बनौं :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
भोलि किनारामा बसेर धुरूधुरू रूँदै धारे हात लाएर नेतालाई सराप्नुभन्दा आजै सचेत बनौं
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भइनै सकेको छ । निर्वाचन पछि जे जस्ता परिदृश्यहरू देखिए, त्यसको समीक्षा जरूरी छ ।
मंसिर १४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको उप-निर्वाचनको जिम्मा दल र नेताहरूलाई मात्र सुम्पिएर हामी मतदाता कानमा तेल हालेर बस्ने अबस्था छैन । कुनै एकजना नेतालाई जिताएर वा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिलाएर मात्र हाम्रो कर्तब्य पुरा हुँदैन । त्यसबाट दलहरू, नेताहरूले मात्रै नभएर हामी मतदाताहरूले पनि सिक्न पर्ने शिक्षा र सच्याउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन् ।
मतदाताहरूले पनि आफ्नो मनोवृत्ति फेर्ने होभने देशलाई चाहिने असल, कुशल र दूरदृष्टि राख्ने ब्यक्तिहरूलाई विजयी गराउन सम्भव छ । सरोकारवाला सबै पक्ष यसो गर्न प्रतिबद्ध छ ? सरकार र उम्मेदवारलाई छाडिदिउँ, के हामी मतदाता तयार छौं र ?
हामी मतदाताहरूले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के छ भने, हाम्रो एक भोट कतै भ्रष्टाचारको लाइसेन्स त बन्दै छैन ? अहिले चुनावमा करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्नेले भोलि त्यसको साँवा र ब्याज नअसुली छोड्छ ? पक्कै असुल्छ । त्यो हामी जनताको नाममा आएको बजेटबाटै अयो देशलाई बिगार्ने राजनीतिक ठेकेदारहरूको हामी मतदाता पनि मतियार हुनेछौं । देश बनाउने हतियार हाम्रो हातमा छ, हतियार सही निसानामा भेदन गरौं; कोही कसैको मतियार नबनौं । तपाईं हाम्रो एक मतले देश सुखी र समृद्ध बन्न सक्छ । भोलि किनारामा बसेर धुरूधुरू रूँदै धारे हात लाएर नेतालाई सराप्नुभन्दा आजै सचेत बनौं ।
निर्वाचनको अर्थ वास्तवमा जनता आफ्नो मालिक आफैँ बन्नु हो । तर बिडम्बना, हामीले जुन लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छौं, यसले जनतालाई मालिक होइन; दास नै बनाइरहेको छ । समाजको सबभन्दा पीँधमा पारिएको बर्ग, लिंग, जाति यस्तो निर्वाचनबाट कहिल्यै माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्।
प्राय: सबै दलहरूभित्र टिकट वितरणमा पक्षपात र पैसाको लेनदेन भएको गुनासो सार्बजनिक भइरहेका हुन्छन् । अझ महिलाको सन्दर्भमा भन्ने होभने सबै दलहरूभित्र झनै पक्षपात भएको देखिन्छ । टिकटको लागि शरीरसम्म सुम्पिनु पर्ने लज्जास्पद खबरहरू पनि बजारमा आउन सुनिन थालिएको छ । हाम्रा पुरूष नेतागणहरूको भविष्यवाणी छ- महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्दैन । त्यसैले टिकट दिएर के काम ?प्रतिस्पर्धैविना परिणाम सुनाउने यो कस्तो तरिका हो ? प्रतिस्पर्धा गर्न दिएपछि न थाहा हुन्छ, परिणाम कसले ल्याउँछ भनेर । दलहरूको कस्तो लोकतन्त्र हो ?
अहिले पनि नबगठित मन्त्रीमण्डलमा महिला मन्त्रीको सङ्ख्या २ मात्र छ भने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा महिला मन्त्री नभई पुरुषलाई सुम्पिएको छ यस्तो अवस्थामा नेपालमा महिला हक अधिकार तथा आरक्षणको कुरा कानुनमा मात्र सिमित छ ।अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म कसैको निगाहमा बाँच्नु पर्ने वाध्यता रहिरहन्छ । यसको लागि आवश्यक परे नीति निर्माण तहमा रहेका महिला नेतृत्वले पार्टीको घेराभन्दा माथि उठेर संघर्षको अगुवाई गर्ने र सबै महिलाले निशर्त सहयोग गर्ने आँट गर्न जरूरी छ ।
निर्वाचन जनताको लागि उत्सव हुनु पर्ने हो । तर शासकहरूको स्वार्थ, नेता-कार्यकर्ताको अदुरदर्शिता र मतदाताहरूको अचेतनताको कारण यो निर्वाचन देश र जनताका लागि अभिशाप बन्दैछ । मतदाताहरूलाई डर, धाकधम्की र बिभिन्न प्रलोभनमा पारी मत प्राप्त गर्ने उही पुरानो खेलको पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ । हामीले अझै पनि यिनैलाई जिताएर भ्रष्टाचार दुगुना पार्ने ? अझै पनि यिनलाई जिताएर दण्डहिनता तीनगुणा पार्ने ? अझै यिनीहरुलाई जिताएर राज्यकोषको दोहन चौगुणा पार्ने ?